Waxaa xaqiiqo ah diidanayn in aad iPhone malaha waxaa ku jira qaar ka mid ah macluumaadka aad u qiimo badan. Emails Your labada shakhsi oo la xidhiidha shaqo waxay noqon kartaa mid aad u muhiim ah. Waxaad sidoo kale yeelan karaan sirta ah qaarkood iyo login warbixin ku saabsan iPhone in aadan rabin in lagu dhaco gacmo qaldan. Sidoo kale waa run in aad leedahay kartaa macluumaad bangiyada shakhsi aad iPhone in aadan rabin in qof ogayn.
Dhibaatada waxa ay tahay in aad rabto in aad takhaluso ama iibiso jir iPhone, maxaa yeelay, aad rabto in aad ka iibsan mid cusub laakiin aad ka shakisan yihiin oo ku saabsan macluumaadkan helo gacmo qaldan. Sidaa darteed, waxaad u baahan tahay qalab oo u oggolaan doonaa inaad si joogto ah masixi xogta ka telefoonka.
Qaybta 1. Mid ka mid ah click in ay tirtirto wax walba oo ku saabsan iPhone
Qalab ee ugu fiican ee kaa caawin kara samayno waa SafeEraser Wondershare . Sidan sababta SafeEraser yahay si wax ku ool ah.
Sidee in ay tirtirto wax walba oo ku saabsan iPhone isticmaalaya Wondershare SafeEraser
Raac tallaabooyinkan fudud si buuxda u masixi dhammaan xogta ku saabsan iPhone.
Tallaabada Koowaad: download iyo rakibi SafeEraser Wondershare on your computer. Orod barnaamijka ka dibna xiriiriyaan iPhone in your computer iyadoo la isticmaalayo fiilooyinka USB. Waa in aad arki uu furmo suuqa hoose.
Tallaabada Labaad: Riix "masixi oo dhan Data" in this suuqa kala hoose.
Talaabada Sadexaad: Waxaa lagaaga baahan doonaa inaad gasho erayga "tirtirto" si loo xaqiijiyo in aad rabto in aad xogta aad tirtirayaa oo dhan.
Talaabada Afraad: Hubi in qalab aad xiran yahay si aad u computer marayo nidaamka oo dhan si loo hubiyo ku-oolnimada.
TALAABADA SHANAAD: Marka geedi socodku waa dhameystiran waxaad arki doontaa suuqa kala socda.
Delete Wax walba oo iPhone Video Tutorial
Qaybta 2. hab Common in dadka tirtirto wax walba oo ku saabsan iPhone
Waxaa jira dhowr siyaabood oo kale si ay u masixi dhammaan xogta ka iPhone inkasta oo laga yaabo in aanay sidii wax ku ool ah sida la isticmaalayo Wondershare SafeEraser noqon. Halkan ka mid ah siyaabahan.
Tallaabada Koowaad: Tag app Settings ku saabsan iPhone oo markaas garaac Guud.
Tallaabada Labaad: Scroll si hoose si aad u ogaato "u celi" iyo Tubada waxa ku.
Talaabada Sadexaad: Markaas Tubada on "masixi oo dhan Contents iyo Settings."
Talaabada Afraad: Tubada on "masixi iPhone" furmo sababtay. Waxaad u baahan doontaa inay hesho on "masixi iPhone" labo jeer si loo xaqiijiyo tani ay tahay waxa aad doonayso in aad qabato.
Tallaabada shanaad: yaabaa in loo baahdo in aad geli code pass. Tani waa inay sii xaqiijiyo in aad rabto in aad masixi xogta oo dhan.
Talaabada Lixaad: tallaabada ugu dambeysa waa inuu soo galo Password ID Apple inay soo saarto aad iPhone ka "Raadi aan Phone" iyo demi "dhaqaajiso xir."
Marka taasi la sameeyo, aad iPhone dhammaantiis la tirtirayaa xor ayaad u tahay in ay iska iibiso ama u dhiib qof kale. Dhibaatada kaliya la habkan waa in ma damaanad qaadi karno in ay hubiso in xogta aad gebi ahaanba unrecoverable ka dhigi doonaa. Sidaa darteed waxaa laga yaabaa in aanay ikhtiyaarka ugu fiican haddii aad rabto in aad iibiso iPhone. Si aad u iibiso iPhone, si loo hubiyo in xogta la tirtiray waa unrecoverable.
> Resource > iPhone > Sida loo Delete Wax walba oo iPhone